ချောင်ချောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
မင်မင်းဆက်လက်ထက်က ချောင်ချောင်း၏ သရုပ်ဖော်ပုံ။ (စန်းချိုင်ထောဟွေစွယ်စုံကျမ်း)
၂၁၆-၂၂၀ မတ် ၁၅
၂၀၈-၂၂၀ မတ် ၁၅
ဟန်မင်းဆက်၊ ပေပြည်နယ်၊ ချောင်းနယ်
၁၅ မတ်၊ ၀၂၂၀(220-03-15) (အသက် ၆၄–၆၅)
၂၂၀ ဧပြီ ၁၁
မိသားစုအမည်: ချောင် (曹)
ကိုယ်ပိုင်အမည်: ချောင်း (操)
လောကဝတ်အမည်(အများခေါ်): မုန့်ဒယ် (孟德)
ချောင်ချောင်း ( pronunciation (ကူညီ·ချက်လက်); [tsʰǎu tsʰáu]; တရုတ်: 曹操; အင်္ဂလိပ်: Cao Cao; အေဒီ ၁၅၅-၂၂၀ ) အများသိအမည် -မုန့်ဒယ် (တရုတ်: 孟德) သည် တရုတ်စစ်ရေးစစ်ရာ အရှင်သခင်၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ ကဗျာဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အရှေ့ဟန်မင်းဆက်၏ ဒုတမယမြောက်နောက်ဆုံး မဟာနန်းရင်းဝန်လည်းဖြစ်ပြီး အရှေ့ဟန်မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးနှစ်များတွင် ၎င်း၏အာဏာစက်သည် လွန်စွာကြီးမားကျယ်ပြန့်ခဲ့ကာ သုံးပြည်ထောင်ခေတ်၏ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်များထဲကတစ်ဦးဖြစ်၏ ။ ချောင်းဝေပြည်ထောင်ဟု ပေါ်ထွန်းလာမည့်နိုင်ငံအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်များကို အခြေချပေးခဲ့သူ၊ ၎င်း၏ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက် ဧကရာဇ် ပြည့်ရှင်မဖြစ်ခဲ့သော်လည်း သေလွန်သောအခါ သားဖြစ်သူချောင်ဖီက ၎င်းကို "ဝေပြည်၏ ဝူဧကရာဇ်" အဖြစ် ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် သမိုင်းကြောင်းအရ အငြင်းပွားဖွယ်ကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော စာပေများ၌ ချောင်ချောင်းကို ရက်စက်သော၊ ဂရုဏာမဲ့သောသူတစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ကျူးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဖက်၌လည်း ၎င်းကို ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စထက်မြက်သော အုပ်ချုပ်သူ၊ စစ်ရေးစစ်ရာကဝေတစ်ဦး၊ လက်အောက်ငယ်သားများကို မိသားစုဝင်များကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်တတ်သည့် ဩဇာတိက္ကမနှင့်ပြည့်စုံသောသူဟူ၍လည်း ချီးမြောက်ကြပေသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အရှေ့ဟန်ပြည်ပြိုကွဲပြီးနောက် ချောင်ချောင်းသည် တရုတ်ပြည်၏ မြောက်ပိုင်းနယ်မြေအများစုကို စုရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကာ ထိုနယ်မြေများသည် လူအများစုနေထိုင်သော နာ်များဖြစ်သည်။ ချောင်ချောင်းသည် နန်းရင်းဝန်အနေဖြင့် ပြည်သူပြည်သားများကြား ငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင်ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း စီးပွားရေးရာတိုးတက်မှုများပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း ဟန်ဧကရာဇ်မင်း ရှန်းကို ရုပ်သေးရုပ်ပမာ ဆက်ဆံ၍ နန်းရေးနန်းရာများကို ဧကရာဇ်အစား ၎င်းကသာ ထိန်းချုပ်အုပ်စိုးခဲ့သောကြောင့် ပြင်းစွာ ဝေဖန်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ထိုခေတ်တွင် တိုင်ပြည်သည် အဓိကနယ်မြေသုံးခုကွဲပြားခဲ့ရာ တိုက်ရိုက်အနေဖြင့် ချောင်ချောင်း မချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သော ပြိုင်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဝူပြည်က စွန်းချွမ်၊ ရှူပြည်က လျှိုပေ့ တို့ဖြစ်ကြသည်။
ချောင်ချောင်းသည် ကဗျာလင်္ကာ၊ တရုတ်စာအရေးအသား (လက်ရေး) နှင့် သိုင်းပညာတို့တွင်လည်း ဆရာတစ်ဆူဖြစ်ကာ ဆွန်ဇူး ရေးသားခဲ့သော "စစ်သေနကဗျူဟာ"ကျမ်းကို ထပ်တိုးမှတ်ချက်များအပါအဝင် စစ်ရေးဆိုင်ရာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများစွာကို ရေးသားခဲ့သည်။ တရုတ်ပြည်၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဧကရာဇ်ပြည့်ရှင်အများစုကြား၌ ၎င်းကို အမှတ်တရရှိကြပေသည်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
↑ "太祖一名吉利，小字阿瞞。" Pei Songzhi's annotation in Sanguozhi vol. 1.
↑ de Crespigny (2007), pp. 35, 38.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ချောင်ချောင်း&oldid=668022" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။